စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ သုတေသနပြုချက်အရ လူတိုင်း လူတိုင်း တစ်သက်မှာ အနည်းဆုံး
တစ်ကြိမ်လောက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလိုက်ချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်ဖူးကြတယ်လို့
ဆိုပါတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ၊စိတ်ညစ်စရာတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့
အရာမို့ တစ်ခါတစ်ရံ ဒီလိုစိတ် ( သတ်သေချင်စိတ်) ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝတော့
အများအားဖြင့် အဲဒီလိုသတ်သေချင်စိတ်က အိပ်ချိန်မှာပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တခြားအချိန်မှာက ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဆင်းရဲဆင်းရဲ ၊ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်ညစ်၊
မလုပ်မဖြစ်တဲ့ လုပ်စရာအလုပ်တွေက လုပ်နေရတာဆိုတော့ သတ်သေချင်စိတ် သိပ်
ထင်ထင်ရှားရှား မဖြစ်သာပါဘူး။အိပ်ချိန်မှာကျတော့ ဘာအလုပ်မှမရှိတော့ပဲအားသွား
တဲ့အတွက် စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ၊စိတ်ညစ်စရာတွေ တမင်မစဉ်းစားရဘဲ အလိုလို
တသီတသန်း ကြီး ပေါ်လာပြီး အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်၊စိတ်ဆင်းရဲလေ အိပ်မပျော်လေ၊
အိပ်မပျော်လေ စိတ်ဆင်းရဲလေနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလိုက်
အိပ်ရာကနိုးလာတော့လည်း အိပ်ရေး၀၀၊မ၀၀ အိပ်မပျော်ခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ သတ်သေ
ဒီသဘောကို ကိုယ်ကနားလည်ထားရင် အိပ်ချိန်မှာ အပိုအတွေးတွေ လုံးဝမတွေးမိ
အောင်အလေ့အကျင့် လုပ်ထားရုံပါပဲ။အခြေအနေအရ ကိုယ်မတွေးပေမယ့်
အတွေးတွေက အလိုလိုပေါ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ဂုဏ်တော်ပွား၊မေတ္တာပို့၊ ၀င်လေ
ထွက်လေ ရှုပြီး အလိုလိုအတွေးပျောက်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့။တချို့ကလည်း
တစ်၊နှစ်၊သုံး၊လေး ရေတွက်ရင်း အိပ်ပျော်အောင် လုပ်ကြတာပေါ့လေ။ဘယ်လိုလုပ်
လုပ် အိပ်ပျော်သွားဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။သိပ်လိုအပ်လာရင် အိပ်ဆေးထသောက်
အိပ်လို့ ပျော်ပျော် မပျော်ပျော်၊ နိုးနေချိန်မှာ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာသာလုပ်
နေလိုက်ရင် သေချင်စိတ်ပျောက်သွားမှာပါ။အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်
နေဖို့ပါပဲ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ မလုပ်ရရင် တချို့က သေပြစ်လိုက်ချင်ကြပါတယ်။သေ
လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။သေရင်ပြီးပြီ။ဘာဆို ဘာမှလုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ဒီတော့ သေ
ပစ်လိုက်မယ့်အစား ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလောက်
အောင်မြင်အောင် လုပ်နေရုံပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက် သို့မဟုတ် အများအတွက် အကျိုးပြုတဲ့ အဲ့ဒီအလုပ်အောင်မြင်မှုနဲ့ ကျေနပ်နေလိုက်ရင် သေချင်စိတ်ပေါ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
သေချင်စိတ်ဖြစ်တုန်းက သတ်သေလိုက်ရင် အခုဆိုသေသွားပါပြီ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို
သေသွားပြီလို့ သဘောထားလိုက်ရင် မသေချင်တော့ပါဘူး။ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သတ်
မသေလည်း သူဘာသာသူ ခဏနေ သေရင်သေသွားမှာပဲ၊မသေမှာမပူနဲ့၊အချိန်မရွေး
သေသွားနိုင်ပါတယ်၊ အချိန်မရွေး သေမှာပါ လို့ လေးလေးနက်နက် ဆင်ခြင်လိုက်ရင်
လည်း သတ်သေဖြစ်မှာမဟုတ် ပါဘူး။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေသွားသူတွေကို သတိရလိုက်ရင်လည်း
သေချင်စိတ် ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေသွားပြီလို့ သတိထားလိုက်
ရင် လုပ်ချင်သလောက်လေးပဲလုပ်နေရတာ၊ လုပ်နိုင်သလောက်လေးပဲလုပ်နေရတာ
အပေါ်ကျေနပ် အားရမှာပါ။တိုတောင်းလှတဲ့ဘ၀လေးမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးလုပ်
ပြီး စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေသွားရဖို့က အဓိကပါပဲ။ ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေ၊ကိုယ်
မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ မနိုင်ဝန်ထမ်းပြီး ပင်ပန်းမနေသင့်ပါဘူး။မနိုင်ဝန်ထမ်းရင်
မကြီးဖို့ ဆိုတာက ဒါလည်းကုသိုလ်ပဲဆိုပြီး အကုန်လိုက်မလုပ်ဖို့ပြောတာပါ။ကုသိုလ်
အလုပ်ကတော့ အမြဲလုပ်နေရမှာပါပဲ ။ကုသိုလ်စိတ်ကတော့ အမြဲဖြစ်နေရမှာပါပဲ။
နောက်ဆုံးပေါ့လေ ..ဘယ်လိုမှစိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ သတ်သေတော့မယ်ဆိုရင်
လည်း သေခါနီးလေးဝိပဿနာတော့ အားထုတ်လိုက်ဦးမယ် ဆိုပြီး ကိုယ်ရှုမှတ်နေ
ကျနည်းနဲ့ တရားလေးတော့အားထုတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။သီဟာထေရီမလို လူမသေပဲ
ကိလေသာသေပြီး ရဟန္တာ ဖြစ်မသွားဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲ။ရဟန္တာ မဖြစ်
လည်း သောတာပန်ပေါ့၊သောတာပန်မဖြစ်လည်း ဖြစ်ပျက် ဥာဏ် ပေါ့။ဖြစ်ပျက်ဥာဏ်
မရ လည်း စိတ်အေးချမ်းသာမှုပေါ့။ တရားအရသာတွေ့ပြီး စိတ်အေးချမ်းသွားပြီဆိုရင်
သေချင်စိတ်ရှိမှာ မဟုတ် တော့ပါဘူး။ စိတ်အေးချမ်းသာနေပါလျှက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား
မပြင်တော့ဘူး ဆိုပြီးတော့တော့တကယ်မသေချင်ပဲ အတင်းမသေလိုက်ပါနဲ့နော်။
သူများကိုသတ်မှ ပါဏာတိပါတ မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်သတ်လည်းပါဏာတိပါတ နော်။
တကယ်တော့လူသေဖို့ထက် ကိလေသာသေဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ကိလေသာ
သေရင်လူလည်းမသေချင်တော့ပါဘူး။ ကိလေသာမသေလို့သာ လူကသေချင်နေတာ
ပါ။ တကယ်ဆို ကိလေသာသေရင် လူမသေချင်တော့တာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိ
လေသာသေရင်လူမသေတော့တာပါ။အရင်ဘ၀ က ကိလေသာတွေကြောင့် ဒီတစ်
နောက်ဘ၀ မရှိတော့တဲ့အတွက် သေစရာ လူ ဆိုတာကိုမရှိတော့လို့လူမသေတော့
ပါဘူး။ ကိလေသာသေရင် ရဟန္တာ ဖြစ်၊ ရဟန္တာဖြစ်တော့ နောင်ဘ၀မရှိ၊ နောင်ဘ၀
မရှိတော့ဘယ်တော့မှမသေ.....၊ကိလေသာသေလို့နောင်ဘ၀ မဖြစ်တော့ရင် ဘယ်
တော့မှမသေရတော့ပါဘူး။သေခြင်းတရားက အပြီးတိုင် လွတ်မြောက်သွားပါပြီ။
Posted by yankin at 8:37 AM No comments:
လက်၏ တန်ဆာသည်လက်စွပ်၊ လက်ကောက်မဟုတ် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ ခြင်းသာ။
နား၏တန်ဆာသည် နားကပ် နားဋောင်းမဟုတ် တရားဓမ္မနာကြားခြင်းသာ။
ကိုယ်၏အဆင်း တန်ဆာသည် ဘယက်ဒွါဒရာမဟုတ်၊မေတ္တာဂရုဏာဖြင့် သူတစ်ပါးအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းသာ။
Posted by yankin at 8:26 PM No comments:
=ကိုယ်လိုချင်တာ တကယ်ဟုတ်မဟုတ် သေသေချာချာ
=စစ်ဆေးကြည့်ပါဦး မစစ်ဆေးဘဲနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တာ ဒါပါပဲလို ထင်ပြီး
=လုပ်ကြ၊ ကိုင်ကြနဲ့ အောင်မြင်တယ် ရလာတယ် ဆိုပါတော့၊
=အဲဒီအချိန်ကျမှ ကိုယ်လိုချင်နေတာက ဒါမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊
=အစက ကိုယ်လိုချင်တယ်ထင်လို့ အဲဒါရဖို့
=လုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်အား၊ ကုန်သွားတဲ့အချိန် စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ၊
=အရင်းအနှီးကအများကြီး။ ဘ၀ထဲကအချိန်တွေ ဖဲပေးလိုက်သလိုချည်းပဲနော်။
=စိတ်မငြိမ်းချမ်းစရာတွေ အမျိုးမျိုးမြင်ရတယ်၊ ကြားရတယ်၊
=စိတ်ဆိုတာ အရှိန်ရနေရင် ရတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်၊
=ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အရှိန်ရနေရင် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်၊
=မငြိမ်းချမ်းတဲ့ အရှိန်ရနေရင်လည်းပဲ မငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘက်ကိုပဲသွားတယ်။
=ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရှိန်ရနေအောင် အလေ့အကျင့်များများလုပ်ပါ၊
=သိလာလေလေ - လောဘဖြစ်လာလေလေ၊
=ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာ များလေလေ- မာနဖြစ်လာလေလေ၊
= ဒါကြောင့်..စိတ်ဟူသည် အမှိုက်ထည့်သည့် ပုံးအသစ် ကလေး၊
=ကိလေသာတွေသည် အမှိုက်မျိုးစုံပါလားဟု နှစ်လုံးသွင်းတက်လေလျှင်......
=အဆိုးတွေကို ထိုင်တွေးပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေရင်
=မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်ဖြစ်ပြီး ညှိုးနွမ်းနေမယ်။
=တခြားလူတွေကိုပါ စိတ်ဓါတ်ကျတက်တယ်။ တက်နိုင်သလောက်
=လူဆိုတာ ပြင်ပမှာ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာရှာလေ့ရှိတယ်။
=ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာ ဘုရားက မိမိကိုယ်ကိုပဲအားကိုးတယ်၊
=ပြင်ပဘယ်သူ့ ကိုမှအားမကိုးဘူး။ အဲဒီတော့ အင်မတန်စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာရင့်ကျက်တဲ့
=သူမှာသာလျှင် အဲဒီလို စိတ်ဓါတ်မျိုး ထားလို့ရတယ်။
=အဲဒီအလုပ်ကို လုပ်လို့ရတယ်။ စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့တဲ့သူဟာ
=ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမကိုးချင်ဘူး၊ အားကိုးရာရှာနေတယ်၊။
=မမေ့ကောင်းတဲ့သုံးမျိုးကို ဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိတုန်းက ဟောခဲ့ပါတယ်။
=ပထမတစ်မျိုးက သရဏဂုဏ်သုံးပါးလို့ခေါ်တဲ့ ဘုရားအပေါ်၊ တရားအပေါ်။ သံဃာအပေါ်
=ဒါတွေကို မမေ့ကောင်းဘူးတဲ့၊ ဘယ်လောက်ဘဲ ဒုက္ခတွေ ကြုံနေပါစေ၊
=ဘုရားဂုဏ်၊ တရားဂုဏ်၊ သံဃာဂုဏ် မမေ့ရဘူးတဲ့၊
=ကျောက်ခဲကို နေရာတိုင်းမှာ တွေ့ရတယ်၊ ပတ္တမြားလည်းကျောက်ခဲပဲ၊
=ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့် ပတ္တမြားဟာ ရှားပါးပစ္စည်း ဒုလ္လဘလို့ သုံးရင်ရတယ်။
= ဒါပေမယ့် ပတ္တမြားဟာ ဒီနားမထွက်ရင် ဟိုနားကထွက်တယ်၊ ပြဒါးဓါတ်ရှိတဲ့နေရာမှာ ထွက်မှာပဲ၊
=ဘုရားဆိုတာကျတော့ ကျင့်တိုင်း မပွင့်ဘူးဗျ၊ သုညကမ္ဘာဆိုတာ ဘုရားတစ်ဆူမှမပွင့်ဘူးတဲ့
=ကမ္ဘာကိုခေါ်တာ၊ လူ၊ တိရစ္ဆာန်၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာတွေ ရှိချင်ရှိမယ်၊ ဘုရားတော့မပွင့်ဘူး၊
=သူတပါး ကောင်းစားနေသည်။ ချီးမြှင့်မြှောက်စားခံနေရသည်၊
=အားလုံးက ချစ်ခင်လိုလားနေကြသည် စသည်တို့ အပေါ်၌
=တကယ့် ကြည်ကြည်နူးနူးနှင့် နှစ်သိမ့် ကျေနပ်နေဖို့ဆိုတာက မလွယ်ကူလှပါ။
=ထိုသို့သော စိတ်မျိုးထားနိုင်ပြီးဆိုလျှင် ကိုယ့်မှာ အမှန်တကယ် မုဒိတာဖြစ်နေပေပြီ၊
=လူတွေမှာ ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ အများကြီးရှိတယ် ။ ကိုယ်ဟာကိုယ်
=မယုံနိုင်လောက်အောင် ကောင်းတာတွေလုပ်နိုင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲဆိုတော့
=တကယ်ကောင်းအောင် လုပ်မယ်လို့ မရည်ရွယ်လို့ပါ။
=နေ့စဉ်နဲ့ အမျှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အာရုံတံခါးတွေကတစ်ဆင့်
=စိတ်ဓါတ်မငြိမ်းချမ်းစေတဲ့အကြောင်းတွေ ၀င်လာမစဲ တသဲသဲပါပဲ၊
=မငြိမ်းချမ်းတဲ့ အကြောင်းတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့၊
Posted by yankin at 9:27 PM No comments:
''မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားသည် တိုးတက်ခြင်းကို ပိတ်ဆို့ပါသလား''
စာရေးသူ*** တောသားလေး at 11:30 PM မိမိစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှမေ့လို့မရသောစကားတစ်ခွန်းရှိ၏။“အရှင်ဘုရားမြန်မာလူမျိုးများဆင်းရဲတာဟာ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်က လျှောက်သောစကားဖြစ်၏။မိမိစိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်ခြောက်
ခူးနိုင်ပေ၏” စသည်အားဖြင့်ဟောထားသောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားများရှိပေသည်သာ။ ထို့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာ၏တရားတော်သည်လောကီဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊လောကုတ္တရာဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်အားပေးသောတရားများဖြစ်ပါသည်။သူဋ္ဌေးသားသိင်္ဂါလကိုဆုံးမထားသည့်မိ
သည်။ဖြစ်သင့်တဲ့ လောဘကြီးပွားတိုးတက်ချင်သော ဆန္ဒဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းကြောင့် လောဘဖြစ်
သည်မှာမှန်ပေ၏။သို့သော်လောဘဖြစ်တိုင်းဒုစရိုက်ဟုပြောလို့မရပေ။လောဘသည် ၂-မျိုးရှိပေသည်။ တရားသောလောဘနှင့်မတရားသောလောဘတို့တည်း။အများအတွက်(မိသားစု၊ရပ်ရွာ၊အမျိုး၊ဘာသာ၊ သာသနာအတွက်)ရည်ရွယ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်လျှင်“တရားသောလောဘ” ဖြစ်၏။ (သေ၀ိ
ခေတ်အခေါ် စာကြည့်တိုက်များကိုလည်းတည်ဆောက်ခဲ့၏။ထို့ကြောင့် “စာကြည့်တိုက်အစပိဋကတ်
(၁)စီးကနေ၊ကား ၁၀-စီး ၁၅-စီးပိုင်အောင်စီးပွားရေးလုပ်ကြစမ်းပါ။မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်
မည့်အမူအရာဖြင့်ပြေးလာရာဘုန်းကြီးက “ချမ်းသာပါစေ” ဟုမေတ္တာပို့လေ၏။သို့သော် ကျွဲရိုင်းကြီးက
ဖိုးသူတော်ကကျွဲရိုင်းကြီးကိုအုတ်ခဲကျိုးဖြင့်ဆုံးမလိုက်ရခြင်းသည်ကျွဲရိုင်းကြီးကိုဒုက္ခရောက်စေလိုသော ကြောင့်မဟုတ်၊ဆရာဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုလေးစားသောကြောင့်တည်း။မည်သည့်အရာမဆိုတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ရတော့မည်ဆိုလျှင်တန်ဖိုးရှိသည့်အရာကိုသာရွေးချယ်ရသည်မှာသဘာဝတည်း။ယင်းသဘာဝတရားကိုပင်“ဓမ္မ”ဟုခေါ်သည်မဟုတ်ပါလော။မတရားလောဘဆိုသည်မှာအတင်းအဓမ္မလိုချင်သော
နေသည့် ယောဂီသူတော်စင်ကဲ့သို့ပြောတတ်ကြသေး၏။ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ တရားရိပ်သာကိုသွားပြီးတရား
အားထုတ်သောအခါ(၂)ရက်လောက်အားထုတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတော့၏။ အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ“ကျန်းမာရေးကလည်းမကောင်းဘူး၊ဒီတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါတော့ဘယ် အားထုတ်လို့ကောင်းတော့မှာလဲ၊တရားပြဆရာကလဲအတွေအကြုံနုသေးတော့တရားနာရတာကအားမ
အမှန်ကားအပေါ်ယံအသိလေးကိုတကယ့် “သံဝေဂတရား” ဟုထင်နေခြင်းပင်တည်း။ယင်းသို့ထင်ခြင်း
မှန်ကိုမရလျှင်လူ့ ဘ၀ကြီးကိုငြီးငွေ့သလိုလို၊ စိပ်ပုတီးနှင့်ရိပ်ကြီးခိုတော့မှာလိုလိုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
များကိုမလုပ်ဘဲနေလျှင်လောကီအကျိုးလည်းမရ၊ လောကုတ္တရာအကျိုးလည်းမရဘဲကီမဟုတ်ကုတ်မ
သာဝတ္ထိမြို့ကြီး၌လူဦးရေသန်း ၇၀-ရှိရာသန်း ၅၀မှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြ၏။ဤအရေအတွက်ကို ကြည့်လျှင်ပင်လူပုဂ္ဂိုလ်အများအပြား“တရားထူးများ”ရကြသည်ဆိုသည်မှာပြောဘွယ်မရှိတော့ပေ။ကျန်
များကိုဇောက်ချပြီးကြိုးစားပန်းစားလုပ်နေ၏။ ထိုနှစ်ယောက်တွင် ဘုရားတည်သောသူထက်စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေသော သူကပို၍မြင့်မြတ်၏။အဘယ်ကြောင့်နည်း။သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကမွန်
မြတ်သောကြောင့်တည်း။တခါကအလွန်ရင်းနှီးသော တံငါသည် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိ၏။ တစ်ရက်
လုပ်မှ တစ်ရက်စားရသောကြောင့်ဥပုသ်နေ့မှာ ဥပုသ်စောင့်ချင်သော်လည်း ဥပုသ်မစောင့်နိုင်ကြ။ သို့
နှင့်တစ်ယောက်တစ် လှည့်စီဥပုသ်စောင့်ဖို့ တိုင်ပင်ကြလေသည်။ လပြည့်နေ့ ရောက်သောအခါတစ်
ယောက်ကကျောင်းသို့ သွားပြီး ဥပုသ်စောင့်၏။ကျန်ရစ်သူကို တံငါသည်ကတော့ နှစ်ယောက်စာရဖို့အ
တွက် လှေတစီးနဲ့ ချောင်းထဲမှာ ကြိုးစားပန်းစားနှင့်ငါးများကို ဖမ်းရလေသည်။ငါးများ နှစ်ယောက်စာရ
စဉ်းစားပြီးသာဓုခေါ်နေတော့၏။လူကတံငါတဲ၌ နေသော်လည်းစိတ်ကကျောင်းရောက်နေ၏။ ကျောင်း
ယောက်စာဖမ်းရမှာ၊ဖမ်းမှဖမ်းပါ့မလား၊နှစ်ယောက်စာမရရင်တော့ဒုက္ခပဲ” ဟုတွေးပြီး လောဘနှင့်သော
ထို့ကြောင့် ဘုရားတည်တိုင်းကုသိုလ်ရသည်ဟုပြော၍မရသကဲ့သို့ စီးပွားရေးလုပ်တိုင်းလည်းတရားနှင့်
ဖူးပါသည်။ “သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ- ကိုယ့်အချင်းချင်းစည်းလုံးမှအခက်အခဲမှန်သမျှကျော်လွှားနိုင်မည်”
ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြသည့်မြန်မာပြည်သား တိုင်းရင်းသားများကိုမြောက်မြားစွာတွေ့ရှိရပေသည်။စည်း
နိုင်ပေသည်။ ယင်းအခက်အခက်များကို စုပေါင်းပြီးဖြေရှင်းမှပို၍အဆင်ပြေနိုင်ပါ၏။လူတစ်ရာအတူနေ
Posted by yankin at 9:08 PM No comments:
Posted by yankin at 8:53 PM No comments:
ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူများအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ data များအတွက် စက်များရဲ့ User account မှာ password ပေးထားကြပြီး အဲဒီ password များနဲ့ ကွန်ပျူတာထဲက data များအသုံးပြုလို့ မရအောင် Virus များ တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Folder များမှာ Show လုပ်လို့မရနိုင်တဲ့ Virus အသစ် တစ်မျိုးလည်း တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ Autorun ပါဝင်တာကြောင့်လည်း Virus များဟာ Click မနှိပ်ပေမယ့်လည်း အလိုအလျောက် ကူးစက်လွယ်ပါတယ်။ အဲဒီပြဿနာ တွေကတော့ worm လို့ခေါ်တဲ့ software ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Virus problem တွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် နည်းလည်းတွေကတော့ အဆင်သင့်ရှိပြီးသားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ ဒီလို ပြဿနာတွေကြုံတိုင်း ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာမှာ Autorun စနစ်ကိုပိတ်မယ်ဆိုရင်-(၁) Start > Run ကို Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။(၂) gpedit.msc လို့ရိုက်ပြီး OK ပေါ်မှာ Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
(၃) ထိုအခါ Group Policy Dialog box ပေါ်လာပြီး အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Administrator Templates မှာ Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဘေးမှာပေါ်လာတဲ့ System ဆိုတဲ့စာပေါ်မှာ Double Click နှိပ်လိုက် ပါ။
(၄) ပြီးတော့ Turn off Autoplay ဆိုတဲ့ စာပေါ်မှာ Double Click နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ အကွက်ထဲက Enabled ဆိုတာကို ရွေးပြီး Turn off Autoplay on: မှာ All drives ကိုရွေးပြီး OK နဲ့ ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။
Posted by yankin at 4:19 AM No comments:
အကောင်းမြင်သူနဲ့ အဆိုးမြင်သူတို့ဟာ မေးခွန်း(၃)ခုကို ငြင်းခုန်နေကြတယ်။ မေးခွန်းတွေက-
(၁) မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ဘာလဲ?
မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဖြစ်တယ်။ မြင်ပေမယ့် အရောက်မသွားနိုင်ခဲ့ဘူး။
မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ လမ်းပြကြယ်ဖြစ်တယ်။ အရှေ့မှာ အလင်းတန်းရှိကြောင်း လူတွေကို လမ်းညွှန်နေတယ်။
(၂) လေဆိုတာ ဘာလဲ?
လှိုင်းတွေပိုခက်ထန်အောင် ကူညီသူ.. ကိုယ့်ကိုပင်လယ်အောက် နစ်မြှုပ်ပစ်နိုင်တယ်။
ရွက်တိုင်ရဲ့ကူဖော်လောင်ဖက်.. အောင်မြင်တဲ့ကမ်းကို ကပ်ဖို့ ကူညီသူဖြစ်တယ်။
(၃) ဘဝဆိုတာ ပန်းပွင့်လား?
ပန်းပွင့်ဖြစ်တော့ ဘာထူးလဲ! ပွင့်ပြီး ကြွေသွားတာပဲ မဟုတ်လား!
ဟင့်အင်း.. ပွင့်ပြီး ချိုမြိန်တဲ့အသီးတွေ ချန်ထားခဲ့နိုင်တယ်။
နှစ်ဦးသား အငြင်းအခုန်ဖြစ်နေဆဲမှာ ရုတ်တရက် ကောင်းကင်ပေါ်က အသံတစ်သံလွှင့်လာပြီး သူတို့ကို မေးခွန်း (၃)ခု မေးခဲ့ပြန်တယ်။ မေးခွန်းတွေက-
(၁) ရှေ့တည့်တည့်သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ?
အဆိုးမြင်သူ... ချောက်နက်ကမ်းပါးတွေ တွေ့နိုင်တယ်။
အကောင်းမြင်သူ.... ပန်းပေါင်းစုံဖူးပွင့်တာ တွေ့နိုင်တယ်။
(၂) မိုးဦးရာသီ ကောင်းသလား?
အဆိုးမြင်သူ... မကောင်းပါ။ မြက်ရိုင်းများ ပိုမိုရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
အကောင်းမြင်သူ.... ကောင်းပါတယ်။ ပန်းတွေ ပိုလှပဖူးပွင့်နိုင်ကြတယ်။
(၃) တကယ်လို့ သင့်ကို မြေရိုင်းတစ်ခင်းပေးခဲ့ရင် သင်ဘာလုပ်မလဲ?
အကောင်းမြင်သူ.... သစ်စိမ်းပင်တွေ အပြည့်စိုက်မယ်။
အဲဒီလို သူတစ်ခွန်း ငါတစ်ခွန်းနဲ့ ငြင်းခုန်ခဲ့ကြပြီး ကောင်းကင်ပေါ်က မေးခွန်းထုတ်သူဟာ ဘုရားသခင်မှန်း သူတို့မသိခဲ့ကြဘူး။ သူတို့ဖြေဆိုတဲ့အတိုင်း ဘုရားသခင်က သူတို့ကို ဆုလာဒ်တွေပေးခဲ့ကြတယ်။
အကောင်းမြင်သူကို ရဲစွမ်းသတ္တိပေးပြီး အဆိုးမြင်သူကို မျက်ရည်တွေပေးခဲ့တယ်။
သင်ရော! ရဲစွမ်းသတ္တိကို ရချင်သလား? မျက်ရည်ကိုပဲ ယူချင်သလား?
မူရင်း--- 乐观者与悲观者差别 (အကောင်းမြင်သူနှင့် အဆိုးမြင်သူတို့၏ ခြားနားချက်)
Posted by yankin at 3:17 AM No comments:
နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင် ဦးကျော် ဟိန်း သည် ဦးကိတ္တိသာရ ဘွဲ့အမည်ဖြင့် သာသနာ့ ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး နောက် တရားဟော ပြောမှုများ ပြုလုပ်နေရာ မကြာသေး ခင်က ပိတ်ပင် ခံထားရ ကြောင်း သိရသည်။
ဦးကိတ္တိသာရသည် ပဲခူးမြို့ရှိ ဦးကိတ္ထိပရဟိတ ကျောင်းတိုက်၌ သီတင်းသုံး၍ တရားဟော ပြောနေခြင်းကို ပဲခူးမြို့ သံဃမဟာနယက အဖွဲ့ မှ တားမြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ပဲခူးမြို့ခံ ဆရာတော် တပါးကလည်း “သူက တရားဟောတာ မဟုတ်ဘူး၊ စိတ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးတယ် ပြောတယ်၊ သူအဲဒီလို လုပ်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေက မကြိုက်ဘူး”ဟု မိန့်သည်။
ဦးကိတ္တိသာရ အနေဖြင့် တရားဟောပြောရာတွင် အဘိဓမ္မာ၊ ဝိနည်း တို့နှင့် ပတ်သတ်သည့် အကြောင်းအရာ တခုမှ ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် သက်တမ်း တလျှောက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံ များကိုသာ ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပဲခူးမြို့ရှိ တရားပွဲ သွားရောက်ခဲ့သူ တဦးက ပြောသည်။
“သူဟောနေတာတွေက ဘုရားအဆို အဆုံးအမတွေ တခုမှမပါဘူး၊ လူပြိန်းတော့ ကြိုက်တာ ပေါ့နော်၊ နားလည်တဲ့ သူတွေက မကြိုက်ဘူး၊ သူပါတဲ့ပွဲဆို နာမည်ကြီး ဆရာတော်တွေက ငြင်းကြတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအတွင်းက ဦးပဉ္ဇင်း ဦးကိတ္တိသာရ လူဝတ်လဲသည်ဟူသော သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ သော ကြောင့် ဦးပဉ္ဇင်းကြီးအား ဧရာဝတီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ဖူးသည်။
ဦးပဉ္ဇင်းကြီး ဦးကိတ္တိသာရက “ဦးပဉ္ဇင်းကြီးက ထားဝယ်မှာ တရားဆွေးနွေး ခဲ့တယ်၊ အခုပဲ ပြန်ရောက်တယ်၊ ပြီတော့ မနက်ဖြန် မအူပင် ကျုံနတ်တောရွာ ဆိုတဲ့ရွာမှာ သွားဆွေးနွေးမယ်၊ ဦးပဉ္ဖင်း ဆွေးနွေး တာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားရှိခိုး အခြေခံ၊ ကလေးတွေက ဘုရားရှိခိုးတဲ့ အခါမှာ ရပ်ပြစ် (၈)ပါးဆိုတာ ဘာလဲ။ ဗျသန တရား (၅) ပါး ဆိုတာ ဘာလဲ၊ အဲဒါတွေ ဆွေးနွေးပါတယ်၊ ကလေးတွေ ဦးစားပေးပါတယ်”ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုအချိန်ကတည်းကပင် ၎င်း ဦးပဉ္ဇင်းကျော်ဟိန်း၏ ရဟန်းဘောင်ဝင်၍ တရားပွဲများပြုလုပ်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ရှိနေခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့တရားပွဲများတွင် တရားနာကြားခြင်းထက် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကျော်ဟိန်းကို မမြင်ဘူး၍လာရောက် ကြည့်ရှုသူများရှိ ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဦးကိတ္တိသာရ ဘွဲ့အမည်ရ ဦးကျော်ဟိန်းသည် ရဟန်းမဝတ်ခင်ကလည်း ကျော်ဟိန်း၏ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ခရီးစဉ်ဟုအမည်ပေးကာ၂၀၀၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားသို့ သွားရောက်ခဲ့သေးသည်။
ဦးကျော်ဟိန်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်က စတင်၍ အနုပညာလောကကို ကျောခိုင်းကာ သာသနာ့ ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by yankin at 11:41 PM No comments:
အမေး။ နိုင်ငံတော် သီချင်းကို မည်သူရေးစပ်ခဲ့သနည်း။
အမေး။ မဟာ ဗန္ဓုလသည် မည်သည့်စစ်ပွဲတွင် ကျဆုံးခဲ့သနည်း။
အဖြေ။ သူ၏ နောက်ဆုံးစစ်ပွဲတွင် ဖြစ်သည်။
အဖြေ။ လုံးဝမသိကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။
အမေး။ လူ နှင့် ခွေး၏ ဆက်စပ်ပုံကို ဖြေပါ။
ညီမျှခြင်းနှစ်ဘက်စလုံးမှ `သေမျိုး´ များကို ချေလိုက်သောအခါ
အမေး။ `ကျွဲပါးစောင်းတီး´ စကားပုံကို ရှင်းပြပါ။
အဖြေ။ ကျွဲ၏ ပါးစောင်းအား သွားတီးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အင်မတန်မှ အန္တရာယ်များမည့် အလုပ်ဟု ယူဆရပါသည်။
အဖြေ။ တရုတ်လူမျိုးများဟု ထင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသူကို တော်တော်လေး အမြင်ကပ်ပါသည်။ သူ့ဘာသာ လက်နဲ့အလွယ်တကူ စားလို့ရနေတာကို တုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြင့် ညှပ်ပြီး မခက်ခက်အောင်လုပ်ပြီး စားရသည်မှာ သိပ်အဓိပ္ပာယ် မရှိဟု ထင်မိပါသည်။ တူ၏ အခြားမကောင်းသောအချက်မှာ ဟင်းချိုသောက်၍ မရခြင်းဖြစ်သည်။
အဖြေ။ ရေဇလုံကို ဆေးပါ။
အမေး။ So far so good
အဖြေ။ ဝေးလေ ကောင်းလေ။
Posted by yankin at 6:22 AM No comments:
Posted by yankin at 6:07 AM No comments:
Posted by yankin at 8:33 PM No comments:
Posted by yankin at 7:54 AM No comments:
ရုပ်လက္ခဏာ မျိုးရိုးဗီဇ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်နေသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပထုတ် စီးကရက်များ သုံးစွဲရန် မသင့်
သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်သောဆေးရွက်ကြီးကို မြန်မာလူမျိုးများသည် ပါးစပ်ထဲထည့်၍ငုံ
ခြင်း၊ ဆေးလိပ်လိပ်၍ အငွေ့ရှုခြင်းများဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ရှေးခေတ်မြန်
မာများသည် ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲခြင်း၊ လက်ဖက်စားခြင်း၊ လက်ဖက်အကျရည်သောက်ခြင်း
ဖြင့်စကားစမည်းဝိုင်းများဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြသည်မှာ မြန်မာလူမျိုးများဓလေ့ပင်ဖြစ်
သည်။ ခေတ်၏သိသာစွာတိုးတက်လာမှုပေါ်မူတည်၍ ယခင်သုံးစွဲနေကြ မြန်မာ့ဆေးရွက်
ကြီးအပြင် ဗားဂျီးနီးယားဆေးရွက်ကြီး အမျိုးအစားကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ချဲ့ထွင်စိုက်ပျိုးလာ
ပြီးယနေ့ခေတ်လူငယ်များသုံးစွဲနေသည့် စီးကရက်များထုတ်လုပ်ကြသည်။ တစ်ဖက်နိုင်ငံ
မှလည်း အဆင့်မြင့် စီးကရက်မျိုးစုံ တင်သွင်းလာခဲ့ကြ၍ မြန်မာ လူမျိုးများတွင် စီးကရက်
သောက်သုံးမှုပိုမိုများပြားခဲ့သည်။ စီးကရက် သောက်သုံးမှုကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး
များဖြစ်သော WHO မှအသိပေးတားမြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းတွင် စီးကရက် သောက်သုံးမှုကို
ဆန့်ကျင်သောစာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများဖြင့်သရုပ်ဖော်ပြခြင်း၊ ပညာပေးဟောပြောပွဲများ ပြု
လုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့် တားမြစ်လာကြသည်။ ယခုအခါပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော
စီးကရက်များ၊ ပြည်ပမှတရားဝင်တင်သွင်းလာသော စီးကရက်များနှင့် နယ်စပ်ဒေသများ
မှ တရားမဝင်ယူဆောင်လာသော စီးကရက်များစသည်ဖြင့် မျိုးစုံတွေ့ရသည်။ ပြည်တွင်း
ဖြစ်ထုတ်လုပ်သောစီးကရက်များထက် တရားဝင်ရော တရားမဝင်နည်းနဲ့ပါနည်းလမ်းမျိုး
စုံ၊ တံဆိပ်မျိုးစုံဖြင့် အခွန်ဆောင်တာရော၊အခွန်မဆောင်တာပါပါဝင်သည့်နယ်စပ်ဒေသ
များမှဝင်ရောက်လာသော စည်းကမ်းမဲ့ စီးကရက်များသည် သုံးစွဲသူတို့၏ လူမှုစရိုက်ရုပ်
လက္ခဏာ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသောကြောင့် ဝိုင်းဝန်းတားဆီး ဖျက်
သိမ်းသင့်ကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ထုတ် ပြည်မြန်မာဂျာနယ်
Posted by yankin at 7:40 AM No comments: